Polyester Nnọọ, polyester agịga Nnọọ, Needlepunched Nnọọ - Tiantai Yongzhu
Air-oyi Myọcha ntupu
Naịlọn ikuku-oyi nyo ntupu
Polyester ikuku-oyi nyo ntupu
Polypropylene ikuku-oyi nyo ntupu
Polyester nyo ụdị
Polypropylene nyo ụdị
High okpomọkụ ájá-wepụ ákwà akpa
Micron Rating Liquid Myọcha akpa
Agịga chere mmiri mmiri filtration
Tiantai Yongzhu Myọcha Factory bụ a nnukwu emeputa nke nonwoven ákwà na China. anyị na e-ege na-abawanye nke ulo oru mbo na rụpụta, ogbako, na ngwá, ewebata n'ime elu oru na sayensị si mba ọzọ.
Anyị ụlọ ọrụ nwere ike imewe ike na anyị na-tumadi na-emepụta nzacha ihe onwunwe, na ájá mwepụ akpa, agịga chere, nonwoven nyo ákwà na ikuku-oyi iyo. Anyị na ngwaahịa na e exported karịa mba 40, gụnyere Southeast Asia, Middle Asia, Europe, Australia na America.
Anyị mgbe niile itinye ka nnyocha nke ọhụrụ ngwaahịa, na mepụtara a usoro nke na ngwaahịa, dị ka ndị na-esonụ:
1) Akwa-okpomọkụ nzacha ihe: Metamax agịga chere, FMS agịga chere, faiba glaasi agịga chere, PTFE film agịga chere, film nzacha ihe, P84 agịga chere, PPS agịga chere, ndị na-abụghị kpara nzacha ihe. Ha na n'ọtụtụ ebe etinyere ojiji nke elu-okpomọkụ ájá mwepụ na ọrụ nke nkà mmụta banyere ígwè na smelt, ekwela n'igba ihe oku, Alụlụụ ike ọgbọ, okpomọkụ-eguzogide ihe, bitumen n'ahụhụ, coal, ciment, Coke, mmanụ ọkụ ji esi mmiri ọkụ, wdg
2) Liquid-nzacha ngwaahịa: kpara nyo-ákwà, monofilament nyo-ákwà, polypropylene agịga chere, mgbagwoju agịga chere, nke na-eji na ụlọ mposi na ngwá dị ka etiti ma belt-ụdị iyo-pịa.
Mbuọtidem na anyị onwe anyị ọgaranya ike, elu na ngwá, elu-edu ngwaahịa na zuru ọrụ, Haotian esesịn nwetara ma anụ ụlọ na mba ahịa 'obi. Ebumnobi anyị: Anyị na-etinye àgwà na n'aka na a paramount ọnọdụ.
3) ikuku-oyi nyo mesh.Widely eji na ebe dị ka filtration na nkewa ụlọ ọrụ (ọtụtụ-eji nri filtration na ụlọ ọrụ nyo), na ụlọ ọrụ nke na mmanụ ala, chemical, nkà mmụta banyere ígwè, ciment, gburugburu ebe obibi dedusting ma nke m. Filtration udu pụrụ si 27% na 78%. Dị ka nri ụlọ ọrụ maka-egwe ọka nzacha na ntụ ọka-egwe ọka,-egwe ọka na ndị ọzọ na mkpụrụ-egwe ọka. Dị ka glucose mmepụta, mmiri ara ehi ntụ ntụ, soybean mmiri ara ehi wdg
Steel mgbanaka kpachie nyo bag
PTFE akpụkpọ ahụ agịga chere
Polyester mgbochi static agịga chere (blended na ...
P84 (polyimide) agịga chere
Okwu: okwu: NO. 2 Tuanjie Road nke Pingqiao Town Tiantai Taizhou City Zhejiang Pro. China.